Taariikh kooban ee ku saabsan Dhismaha Taariikhiga ah ee Taaj Al Maxal ee ku yaala dalka Hindiya!!!! - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhismaha Taaj Al Maxal ee ku yaala dalka Hindiya waxa uu ka mid yahay meelaha ay soo booqdaan dalxiiska ugu badan ee wadanka Hindiya, Dhismaha Taaj El Maxal waxa uu safka hore kaga jiraa oo lagu tilmaamsadaa farsamada Muslimiintii reer Hindiya iyo heerka ay ka gaareen, waxaana sidoo kale uu ka midyahay goobaha ugu magaca iyo Taariikhda dheer ee Caalamka.
Dhismaha Taaj El Maxal(Taj Mahal) waxaa dhisey boqorkii Shah Jahan oo uu u dhisey xaaskiisii Mumtaz Mahal oo ka mid aheyd seddexdii xaas ee uu qabay boqor Shah Jahan. waxaa la dhihi karaa waa dhismo ay ka muuqato Jaceyl uu nin u qabo naagtiisa isagoona xasuus uga dhigey xaaskiisa Tajmahal.
Taaj Maxal waxa ay ku taalaa Magaalo la yiraahdo Agra oo dhinaca waqooyi kaga beegan New Delhi, Waxaana La bilaabay dhismaha Taaj Maxal 1631-kii waxayna qaadatay in la soo gabagabeeyo dhismihiisa 22 Sano iyadoona si xoog ah ay dhismanahaas u wadeen rag gaaraaya 20.000(Labaatan Kun qofood), waxaana ugu dambeyn dhismahaasi la soo gabagabeeyay sanadka markuu ahaa 1653-kii, iyadoona ay ku kacdey dhismahaasi lacaga gaaraeysa 32 Million Rupee oo hadda qiimo ahaan noqoneysa 400 Million oo Doolar.
Abdifatah Mohamed Abdurahman(biyoonde)